ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကော်လာဂျင် နည်းနေတာလား ....... - Hello Sayarwon
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကော်လာဂျင် နည်းနေတာလား .......
ကော်လာဂျင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေက အခုနောက်ပိုင်း လူအတော်များများ အထူးသဖြင့် လေဒီလေးတွေနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးလာတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကော်လာဂျင်က ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနေလဲဆိုတာနဲ့ ကော်လာဂျင် နည်းရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ကော်လာဂျင်ဆိုတာက အရွယ်တင်နုပျိုစေပြီး လှပနေစေတဲ့ ပရိုတင်းတစ်မျိုးပေါ့။ အလှအပအတွက် အားဖြည့်ပေးနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရေပြား၊အရိုး၊ကြွက်သား၊ အရိုးနု၊အရွတ်၊သွေးကြောနဲ့ အူမကြီးတွေမှာရှိတဲ့ တွယ်ဆက်တစ်ရှုးတွေကို အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ကော်လာဂျင်က ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ပါဝင်နေတာလဲ …..
ကော်လာဂျင်က အလှအပအတွက်ပဲ အရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြွက်သား၊ အရေပြား၊သွေး၊ အရိုး၊ အရိုးနု နဲ့ အရွတ်အပါအဝင် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းတွေကိုပါ ကျန်းမာစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်သလို အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆစ်တွေနာတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောပြချင်တဲ့ အချက်တစ်ခုကကော်လာဂျင်က အသားအရေလှရုံ၊ ဆံသားတွေသန်စွမ်းရုံ နဲ့ လက်သည်းခြေသည်းလေးတွေ ကျန်းမာရုံဆိုတာထက် ပိုတယ်ဆိုတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကော်လာဂျင် နည်းနေတာလား …….
ကောလာဂျင်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အသက် ၂၀ ကျော်လာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ကျလာပါတော့တယ်။ ဒီလို ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိမှု ကျဆင်းလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အခုလို လက္ခဏာတွေ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်လာမယ်။ အသားအရေတွေ လျော့တွဲလာမယ်
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကော်လာဂျင် လျော့ကျနေတဲ့အခါ မြင်သာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်အနေနဲ့ မြင်တွေ့နိုင်တာက အရေပြားတွေ တွဲကျလာတာ၊ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း အရေပြားတွေမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတာပါ။
အသက် ၂၀ကျော်၊ ၃၀ လောက်ရောက်လာတဲ့အခါ အရေးအကြောင်းတွေက စဖြစ်တာပါတော့တယ်။ ဒီလို အရေးအကြောင်း ဖြစ်ပေါ်မှုက ကော်လာဂျင် နည်းနေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါ။
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာတဲ့အခါ အဆစ်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲတာက အသက်အရွယ် ကြီးရင့်မှု ဖြစ်စဉ်ရဲ့ သာမန် အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ဆိုပေမယ့် အသက် ငယ်ငယ်မှာ အရိုးအဆစ်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲတာက ကိုယ်တွင်းမှာ ကော်လာဂျင် လျော့နည်းနေတဲ့ လက္ခဏာပါ။
ကော်လာဂျင်က အရိုးနုလေးတွေ၊ အရွတ်တွေ ကျန်းမာစေဖို့လည်း အားဖြည့်ပေးထာတာကြောင့်ပါ။ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးတွေ ကျန်းမာစေဖို့လည်း အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ခံစားရတဲ့ ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေ သက်သာဖို့ ကြာမယ်၊ ကြွက်သားကိုက်ခဲမှုတွေ ပျောက်ကင်းဖို့ အချိန်ကြာမယ်
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးတိုင်းမှာ ကြွက်သား နာကျင်တာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ရပ်ဆိုပေမယ့် ဒီလိုနာကျင်မှုတွေက အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ။ ကြွက်သားမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ အချိန် တော်တော်ကြာတဲ့အထိ မသက်သာတာတွေက ကိုယ်ထဲမှာ ကော်လာဂျင် နည်းနေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါ။
ကော်လာဂျင်က တွယ်ဆက်တစ်ရှူးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးသလို ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေဖို့၊ ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ကော်လာဂျင် နည်းလာတာက ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေဖို့ အချိန်ကြာစေသလို ကြွက်သားထုထည်ကိုလည်း ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ပြဿနာတွေ ခံစားရမယ်
အစာခြေလမ်းကြောင်းမှာ ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ကော်လာဂျင် နည်းနေတယ်လို့ တထစ်ချ မပြောနိုင်ပေမယ့် leaky gut syndrome လို့ခေါ်တဲ့ အူနံရံတွေ ကျန်းမာရေး အားနည်းပြီး သွေးကြောတွေထဲကို ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ ရောက်ရှိစေမယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကော်လာဂျင် လျှော့နည်းနေတာပါ။
ကော်လာဂျင်က အရေပြား၊ ကြွက်သားနဲ့ အဆစ်တွေ ကျန်းမာစေဖို့ပဲ လိုအပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဖြစ်ကြတဲ့ အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနေပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်း အတွင်းနံရံနဲ့ အစာအိမ် အတွင်းနံရံက ဆဲလ်တွေကို ပြုပြင်ပေးဖို့လည်း ကော်လာဂျင်က လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ထိခိုက်မှုတွေ သက်သာဖို့ အချိန်ကြာမယ်
ခွဲစိတ်ကုသပြီးချိန်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခု ထိခိုက်မိချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဒဏ်ရာအနာတရတွေ ရပြီးချိန်မှာ အနာကျက်ဖို့ သက်သာဖို့ ပုံမှန်ထက် ပိုကြာနေတတ်တာက ကိုယ်ထဲမှာ ကော်လာဂျင် နည်းနေတာကြောင့်ပါ။
ကော်လာဂျင်တွေက ပျက်စီးသွားတဲ့ တစ်ရှူးတွေကို ပြုပြင်ပေးသလို အနာကျက်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အနာကျက်ဖို့ သက်သာဖို့ ကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကော်လာဂျင် နည်းနေတာပါ။
အခုပြောတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရပြီလဲ ………. ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကော်လာဂျင် နည်းနေတာလား ……. ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက် စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။
Why Your Collagen Depletes With Age https://www.verywellhealth.com/collagen-supplements-4164818 Accessed Date5November 2021
Collagen Deficiency Symptoms:5Clues You Aren’t Getting Enough in your Diet https://protgold.com/blogs/news/collagen-deficiency-symptoms-5-clues-you-arent-getting-enough-in-your-diet Accessed Date5November 2021
What Is Collagen? https://kidshealth.org/en/parents/collagen.html Accessed Date5November 2021
ကော်လာဂျင် သောက်ပြီးရင် ရေများများ သောက်ပေးသင့်လား .......